ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ (September 2014) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ (September 2014)
ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ (September 2014)
Posted by စာ ကြမ်းပိုး on Oct 5, 2014 in Arts & Humanities, Literature/Books, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 17 comments
စက်တင်ဘာတုန်းက တော်တော်များများ သေကြတယ်လေ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှာဖွေပြီး ကောင်းသမျှလေးတွေ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
၁)” မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့လယ်က သမိုင်းအကြောင်းအပြည့်နဲ့အထင်ကရ Musmeah Yeshua Synagogue ဂျူးဘုရားကျောင်း”
“အာဂရဲ့.. အင်တာဗျူးပညာနဲ့..သတင်း ရေးနည်းက.. ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီနေတယ်…”
ဆိုတဲ့ သူကြီးရဲ့ မှတ်ချက်ချမှု ရခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ။
ရန်ကုန်မြို့လယ်က Musmeah Yeshua Synagogue ဂျူးဘုရားကျောင်း ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို အမေးအဖြေသဘောမျိုး မပေါ်စေပဲ ရေးသွားနိုင်တာမို့ စာကြမ်းပိုးတို့ အကြိုက်တွေ့မိပါတယ်။
၂) အကျိူးတူ = ???
ပျောက်နေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘဲဥရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ ဆန်ဆန် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ။
အဲ့လို အဲ့လို အဖြစ်တွေကြောင့် နစ်နာရတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဏာငွေ
ဆုံးရှုံးရတာတွေက အဖိုးတန် သယံဇာတတွေ
ကောင်းစားသွားတဲ့လူတွေက ဟိုးးးးအဝေးက စိဏတိုင်းသားတွေ
အန္တရာယ်ကြားထဲမှာ အသက်နဲ့ရင်းပြီးလုပ်နေရတဲ့ လူတွေက ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေ
ပေါလန်တွေကခိုးလိုက် မန်နေဂျာတွေကခိုးလိုက် ကြီးကြပ်တွေကဖြောင်လိုက် အင်ချပ်တွေက ဝိုက်လိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေတဲ့ ကျောက်တွင်းလုပ်ငန်း
အကျိုးတူ ဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်မိတာကတော့
အားလုံးက ဝိုင်းခိုးနေတဲ့ ဝေစားမျှစားအကျိုးတူကြီးပါလား ဆိုတာပါပဲဗျားးးးးးးးး
တွေးနိုင်ရင် ဆင့်ပွါး အများကြီးတွေးလို့ရပြီး…
နှမြောတတ်ရင်လည်း နိုင်ငံ သယံဇာတ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ဘယ်လို ကြိုးစားရမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးပါ ရလာနိုင်ပါတယ်။
ခု လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ အတွက် အဖြေရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
ခု တလော တော့ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေဆက်တိုက်ရေးဖြစ်နေတဲ့ ပု(ချ) ရဲ့
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ကလောဘက်က ဆင်တောင် မြင်မထိတောင် စတာတွေကို တောင်တက် အတွေ့အကြုံ ယူ တက်ရတဲ့ အကြောင်းကို ရေးထားတာပါ။
ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ရှမ်းပြည် အငွေ့အသက်ပါတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်မို့ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ရွာထဲက သားဦး ပိုင်ရှင်လေးတွေ၊
သားသမီးပိုင်ရှင် ဖေဖေမေမေတို့ကို ရည်ညွှန်းပြီး ရေးထားတဲ့
ကိုယ်တွေ့ သားဦး၊ တူမ ဦး တစ်ယောက်ကို အရူးအမူးချစ်ရတဲ့ အန်တီဒုံတစ်ဖြစ်မှသည်
အဲဒီ တူမ ဦး က မွေးလာမဲ့ မြေးမဦး ကိုပါ စောင့်မျှော်
အရူးအမူးချစ်မဲ့ အကြောင်း ရေးထားတာပါ။
ချစ်စရာ ပို့(စ) လေးမို့ ဖတ်ရင်း ကြည်နူးမှု ရင်ထဲရောက်မယ်လို့ အာမခံပါတယ်။
၅) သော်ဇင်(လွိုင်ကော်) နှင့် စာပေအင်တာဗျူး
ဂဇက်ရွာသား တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၊ စာပေလောကမှာ အောင်မြင်မှု ခြေလှမ်း မှန်မှန်စတင်နေတဲ့ သော်ဇင်(လွိုင်ကော်) ကို
အမေးအဖြေလုပ်ထားတဲ့ ပို့(စ) လေးပါ။
အလင်းဆက် ကိုယ်တိုင်က …
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မေးသူနဲ့ ဖြေသူဟာ
အဲ့ဒီဖြေသူ ဖန်တီးတဲ့ စာပေလက်ရာကို မေးသူက ရင်းနှီးနေရမှာ…
သူရေးတဲ့စာကို ရင်းနှီးအောင် လေ့လာပြီးမှ သူ့ ကို မေးခွန်းတွေ မေးလို့ရမှာ…
လူကိုပဲ ရင်းနှီးပြီး စာကို မရင်းနှီးလို့ကတော့…
နေကောင်းလား မနေ့က ဘာနဲ့စားခဲ့လဲ…
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာလဲ ဆိုတဲ့ ပေါကြောင်ကြောင်မေးခွန်းတွေပဲ ထွက်လာမှာ။
ဖတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဘာမှ မရနိုင်တဲ့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်အင်တာဗျူးပဲ ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
လို့ ကော်မန့်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ …
စာရေးဆရာရဲ့ အကြောင်းနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပါ ပါအောင် မေးခွန်းတွေကို စာပေလောကအတွက် တထောင့်တနေရာ ရည်ရွယ်ပြီးမှ…စီစဉ်မေးမြန်းခဲ့တာ လို့ ဆိုပါတယ်။
အမေးနဲ့ အဖြေ ညီမျှတဲ့ ချစ်ကြည်မှု အင်တာဗျူးလေးမို့ ဖတ်ရင်း မုဒိတာ ပွါးနိုင်ပါစေ။
– အောင် မိုးသူ
အောင်မိုးသူရဲ့ လက်စ လက်န အတိုင်း စာဖတ်သူကို ဆွဲခေါ်သွားရင်းက…
နောက်ဆုံး စာပုဒ်မှ အခြေအနေမှန်လေးကို ချပြပေးသွားတဲ့ ရသစာ တစ်ပုဒ်ပါ။
အဖွဲ့အနွဲ့ ပြောစရာမရှိတဲ့ ရေးလက်ပိုင်ရှင်မို့ ဒီလထဲက ရသစာကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) ရဲ့ ဒီ လ စိတ်ကြိုက်တွေ့မိတဲ့ ဝတ္ထုတို လေးပါ။
မွန်းမံမှုကောင်းတဲ့ တကဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးမို့ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ဘာလို့ ကြိုက်မိလည်းဆို ကိုပေါက်ရဲ့ ရေးသားမှုမှာ ဒီဖြစ်ရပ်ကို စွတ်ဖက်မှု မတွေ့ရပဲ စာဖတ်သူအတွက်ထင်မြင်ချက်ပေးနိုင်ခွင့်ကို ဖွင့်ပေးခဲ့လို့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့! ဖွင့်ပေးရကျိုးနပ်ပါတယ်။ Best Comment of the post ရထားတဲ့ Twitty ရဲ့ ကွန်မန့်လေးနဲ့ တွဲဖတ်ကြည့်ပါ။
– Kaung Kin Pyar
စာကြမ်းပိုးတို့ သီးသန့် အနေနဲ့ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပို့(စ) ပါ။
မိတ်ဆွေတို့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ အတွင်းက ရွာမှန်မှန် ဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင် ပိုပြီး ခံစား အကြိုက်တွေ့မဲ့ ပို့(စ) လေးပါဗျာ။
အရေးအသားရော၊ အတွေးအခေါ်ရော၊ အချိတ်အဆက် မိမိမို့ ဆရာ တာရာမင်းဝေ အလွမ်းပြေ ရေးလက်မျိုးလို့ ညွှန်းဆိုလိုက်ပါရစေ။
၉) ဆရာမင်းသိင်္ခမှ အတွေးတစ..
အခုတစ်လော နဂါးတွေ၊ အပူးအခွာတွေ၊ တောင်ဝှေးပေါ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြတာတွေ၊ ရေပေါ်မှာ ဗောလောပေါ်ပြနေတဲ့ ဘုန်းကြီး အစရှိသဖြင့် အထူးအဆန်းတွေပေါများနေပါတယ်။
ကိုယ့်မှာသာ ထိုက်သင့်တဲ့ဗဟုသုတနဲ့ အနည်းအကျဉ်းပြည့်စုံမယ်ဆိုရင် တော်ရုံတန်ရုံအလိမ်မခံရတော့ပါဘူး။
ကိုယ်တိုင်အလိမ်မခံရသမျှ အဲဒီသူဟာ မိမိရန်သူမဟုတ်ပါ။
အသက်အရွယ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ ရာထူးအနိမ့်အမြင့်နဲ့မဆိုင်ပဲ သူရဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့သာဆိုင်တဲ့ ယုံကြည်သလိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ချို့အပေါ်မှာ အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်လွန်းတာကလည်း ကိုယ့်အားနည်းချက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကိုကြီးမိုင်းရဲ့ အတွေးနဲ့ အရေးပါ။
လူနည်းတဲ့ လ မှ တင်ဖြစ်တဲ့ အတွက် မငြင်းမခုံဖြစ်တာ နှမြောစရာပါ။
တခြားဖတ်သင့်တဲ့ ပို့(စ) တွေကတော့…
ကို Tun Win Lat ရဲ့ ရေးမိ ရေးရာ တွေးမိတွေးရာ
http://myanmargazette.net/205090 – ဝင်္ကဘာ အပြေးသမား (The Maze Runner)
http://myanmargazette.net/204192 – လေလွင့်သူ (The Rover)
အလင်းဆက် ရဲ့ သီတင်းဇုံ
ညွှန်းချင်တဲ့ ကျန်တဲ့ ပို့(စ) တွေက အပြီးမသပ်သေးတာမို့ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
ဘယ်သေတဲ့ ပို့(စ) မှမညွှန်းချင်တောင် နာ့ သေတမ်းစာ ပို့(စ) ကို ညွှန်းပါလားးး
နိ တို့ စာကြမ်းပိုးတွေ ပြောနေရတယ်။
ဒီမှာ သေပို့(စ) တွေ။ ဟိ..!!
သေပိုစ့်တွေထဲ သားသားလည်း ပါဒယ်
ကျနော်ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်မိတဲ့ ပိုစ်လေးကို ညွှန်းလိုက်တဲ့ အတွက် ကျေးကျေးပါ စာအိုးတို့ရေ
တော်တဲ့အာဂကို ဂုဏ်ပြုပြီး… စိန်ပေါချခ်ျဘုရားကျောင်းအင်တာဗျုးပေးဖို့.. စီစဉ်တာ.. ဘာမေးရမယ်မှန်းမသိလို့…
အိုင်ဒီယာ တော့ ဝုတ်ပါဘူး။ lol:-))
ကိုယ့် ရွှေပြည်ကြီး ထဲ က ခရစ်ယာန် တွေ ရဲ့ အမြင်ကို တကယ်သိချင်လို့ပါ။
“Pope Francis Says Atheists Who Do Good Are Redeemed, Not Just Catholics”.
ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည် သူတွေလဲ ကောင်းအောင်နေရင် ကောင်းတာလုပ်ရင် ငရဲ မရောက်ဘူး လို့ Pope Francis က ပြောခဲ့တယ်။
အဲဒါကို သူတို့ လက်ခံနိုင်လား သိချင်ရဲ့။
တကယ်တော့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တိုင်း ငါတို့ ဘာသာ ကိုမှ မကိုးကွယ် ရင် ငရဲရောက် မယ် ဆိုတဲ့ အမြင် အပြောတွေ ပြင်သင့်နေပြီ။
မဟုတ်လို့ ကတော့ ဘာသာရေး ဟန်ပြ ပြီး အတ္တစစ်ပွဲ တွေ နောက်မှာ စစ်ပွဲ တွေ နဲ့ဘဲ ပျော်နေရလိမ့်မယ်။
အင်တာဗျူး ပို့စ်လေးကိုပါ ညွှန်းထားပါလား
ဒီလရဲ့အညွှန်းပိုစ့်က ဒီလောက်ပဲရှိတာလား…. ရေးကြပါဦးနော်…
ရှားရှားပါးပါး ဖြစ် ညှစ် ရေးထား တင်ထားရတဲ့ ပို့စ်လေးကို မညွှန်းလို့
စာကြမ်းပိုး ကို သပိတ်မှောက်ပါဒယ်
ရှိတဲ့ ဆန္ဒတွေရော ပြလိုက်ရမားး
ညာဖက်အောက်နားမှာ.. Calendar ရှိတယ်မဟုတ်လား..
အဲဒီမှာ.. Sept ကိုပြောင်းကြည့်ရင်.. ရက်တိုင်းတင်ထားတဲ့ပို့စ်တွေ တပုံတပင်တွေ့ရမယ်..။
စာကြမ်းပိုးက.. ၉ပုဒ်ပဲညွှန်းတယ်ဆိုတော့… သေစေညွှန်းတဲ့ပို့စ်တွေအပါအ၀င်…တော်တော်များများ.. ပယ်လို့ပေါ့..
ကြမ်းပိုးကြီး လစ်တော့ ကြမ်းပိုးလေးတွေ ထင်ရာစိုင်းနေလို့နေမှာ။
အွန်းးးးးးးးးးးးး…. “ညွှန်းချင်တဲ့ ကျန်တဲ့ ပို့(စ) တွေက အပြီးမသပ်သေးတာမို့ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်ဗျာ။”
အညွှန်းပိုစ့်ထဲ ကိုယ့်စာလေး ပါလာတာတွေ့တော့…အရမ်း ပျော်တာပဲ….